Amakhono ama-5 asemqoka wonke ama-master franchisees okufanele abe nawo | I-Franchiseek
»Amakhono ama-5 abalulekile wonke ama-master franchisees okufanele abe nawo
Kungenzeka ukuthi wezwa ngakho master franchising futhi uzibuze ukuthi kungakulungela yini wena nebhizinisi lakho. Ngenkathi i-master franchising ingabonakala njengethuba elihle lokukhulisa ibhizinisi lakho emhlabeni jikelele, kunezinto ezithile ongadinga ukuzicabangela - hhayi ebhizinisini lakho kuphela, kodwa kulabo okhetha ukukusiza ukuthi unwebeke. Ukuba yi-master franchisee kwehlukile ekubeni yi-franchisee ejwayelekile, futhi kufanele wazi ngezimfanelo namakhono odinga ukuwafuna lapho ukhetha abantu abazokusiza ukuqhuba ibhizinisi lakho.
UMark Jameson, ovela kuFASTSIGNS International, Inc. wathi: "Kuma-master franchisees, sifuna osomabhizinisi abanobuhlakani futhi abaqonda ngokujulile ukuthi yini edingekayo ukukhulisa uphawu ezweni elisha, ngaphezu kokuqhutshwa ukusiza amabhizinisi emphakathini wawo ukuxazulula izingqinamba zawo zokuxhumana nezokumaketha."
Kulokhu okuthunyelwe, sibheka amakhono ayisihlanu ayisihluthulelo ama-master franchisees amahle kakhulu anawo.
Okuhlangenwe nakho okuningi ezinhlanganweni ezinkulu
Ukuze ikusize usebenzise i-franchise yomhlaba, i-franchisee yakho kufanele ibe nolwazi lokusebenza ebhizinisini elikhulu elinesakhiwo esiyinkimbinkimbi. Ukusebenza endaweni enjalo phambilini kuzonikeza i-franchisee ukuqonda okuhle kokuthi izingxenye ezahlukahlukene zebhizinisi elikhulu zisebenza kanjani, zixhuma futhi zisebenze kanjani. I-Master franchising ingaba yinkimbinkimbi kakhulu ngezingxenye eziningi ezihambayo, futhi ngenxa yalokho, i-master franchisee kufanele izizwe ikhululekile futhi izethembile esakhiweni esinjalo. Kuzoba yindima yama-master franchisees akho ukukhulisa ibhizinisi, elingangezela kwinkimbinkimbi yesakhiwo sebhizinisi. I-master franchisee yakho kufanele ibe nokuhlangenwe nakho okudingekayo ukuze kugcinwe ibhizinisi lisebenza kahle ngenkathi kukhulisa ukusebenza ngasikhathi sinye.
Ukuqonda okuhle kokuthuthukisa nokukhulisa isiko lasemsebenzini
Ngenkathi ama-franchisees amaningi kufanele athuthukise isiko leyunithi yawo ethile, ama-master franchisees anendima enkulu ekwakheni isiko lazo zonke izingxenye ezisendaweni yabo. Ama-master franchisees owakhethayo kufanele akhombise ukuthi bayakuqonda ukubaluleka kwesiko elinempilo emsebenzini nomthelela ongaba nawo ebhizinisini.
Ngaphezu kwalokho, i-master franchisee yakho kungenzeka ivule amayunithi ezindaweni ezinesiko elihlukile kuneleloqobo ngokusebenza, okuthandwa ngabathengi nokwenza ibhizinisi. I-master franchisee yakho kuzodingeka yazi lokhu kwehluka kwamasiko futhi isebenze kanzima ukulinganisa amanani ebhizinisi lokuqala, nezintandokazi zamasiko zensimu entsha, abasebenzi bayo namakhasimende ayo.
Amakhono obuholi obuhle kakhulu
Noma iyiphi i-master franchisee ehloniphekile izoba ngumholi omuhle kakhulu. Kumele bakwazi ukwakha ubudlelwano obuqinile nama-franchisees, abasebenzi, amakhasimende kanye nomphakathi wamabhizinisi obanzi. Kumele futhi bakwazi ukubeka isibonelo kuma-franchisees endaweni yabo futhi bathole ukuhlonishwa yilabo abasebenza ebhizinisini. Amandla we-master franchisee okuhola angaba nomthelela omkhulu ebhizinisini. Ukuze bazinikele ngokuphelele ebhizinisini futhi bafeze indima yabo ngentshisekelo edingekayo, ama-franchisees kufanele athembe futhi ahloniphe umbono we-master franchisee. Ungafisa ukubheka labo abanobuntu obuqinile, abakwaziyo ukukhuthaza abanye.
Kodwa-ke, akuyena ngempela umuntu ozwakala kakhulu noma odume kakhulu owenza umholi omkhulu. Ukukwazi ukwenza abantu bazizwe bebalulekile futhi njengomsebenzi abawenzayo kuyingxenye ebalulekile yebhizinisi nakho kubalulekile. Okudingekayo nokho, yikhono lokuhola ibhizinisi ngendlela ecacile ngothando nangombono. Umholi olungile angaqinisekisa abanye ukuthi babe nokholo kumbono wabo futhi asebenzise amakhono abo okuxhumana ukuze achaze ukuthi yini okudingeka yenziwe ukufeza izinhloso zabo.
Ukuyiqonda kahle insimu entsha
Enye yezimfanelo ezibalulekile i-master franchisee yakho ezodinga ukuba nayo kungenzeka ukuthi iyinto oyintulayo - ukuqonda kahle insimu owenabela kuyo. Njengoba kushiwo ngenhla, kungahle kube khona umehluko omkhulu phakathi kwensimu yangakini naleyo enwebela kuyo. Kuzoba ngumsebenzi we-master franchisee ukuthuthukisa isiko elithile kanye namagugu endawo yabo. Ngaphezu kwalokho, kungahle kube nezithiyo ezinganqotshwa umuntu oqonda kahle insimu. Isibonelo, ulimi lungahluka noma izakhiwo zezezimali nezomthetho kungaba nzima ukuzulazula. I-master franchisee kufanele okungenani yazi ukuthi ingaluthola kanjani usizo ukuphatha lo mehluko. Ngaphezu kwalokho, kungahle kube khona umehluko wesifunda ngaphakathi kwendawo, futhi ama-master franchisees kufanele akwazi ukuqonda ukuthi lawa mabanga wesifunda angalithinta kanjani ibhizinisi.
Amandla amahle wokuqeqesha nokwenza ukuqeqeshwa
Ngisho ne-master franchisee enekhono kakhulu izodinga ukuqeqeshwa okuqhubekayo. Njengeqembu elibhekele yonke insimu, kufanele babe nomdlandla ngokuhlala bazi ngezindlela ezintsha zebhizinisi. Kufanele futhi babe nekhono lokudlulisa ulwazi nokusekelwa kwabo kwamanye ama-franchisees endaweni yabo futhi bagcine intshiseko yokuqeqeshwa nokufunda. Kubalulekile ukuthi ama-franchisees azizwe ekhululekile ukufinyelela ku-master franchisee lapho edonsa kanzima khona.
Ingabe usukulungele ukuthatha ibhizinisi lakho liye ezingeni elilandelayo? Khangisa nge-Franchiseek yakho ye-master franchise Isiqondisi Somhlaba Wonke Se-Franchise.
I-DNS Accountants Franchise Yakha ikusasa lakho nge-DNS Accountants Franchise nebhizinisi lakho nethuba lethu eliqinisekisiwe. Nge…
Hot Inja Academy. Njengomxhasi ongaphansi ophelele we-Asia Franchise Academy, i-Hot Dog Academy ungumphumela wokuqina…
I-One HALAL GLOBAL - UMHLANGANO WOKUQALA WOKUQHAWULA KOMhlaba WOKUQALA KWEMPAHLA I-Rise of Halal yabathengi abangamaSulumane nabangewona amaSulumane…